Famous Scientist Imifanekiso - Amagama Okugqibela Aqala nge-E
AmaSayensi aBaziwayo aMaxesha okugqibela aqala ngo-E
Olu luhlu lweefribhile zezithombe, iifowuni kunye neminye imifanekiso yabasosayensi abadumileyo ngamagama okugqibela aqala ngeleta E.
UGeorge Eastman - uMninimzi waseMelika kunye nomncedisi, mhlawumbi owaziwayo ngokuzenza iifoto zifikeleleke kubantu. Unelungelo lobunikazi lwekhamera kunye nefilimu yokuhamba nayo. Iifrimu zeefilimu nazo zaba sisiseko seshishini lesithombe sokunyuswa.
UCharles de L'Ecluse - (owaziwa nangokuthi nguCarolus Clusius) Udokotela ogqithisileyo kunye ne-botanist, owaziwayo ngomsebenzi wakhe kwi-horticulture.
UCliusius wabeka isiseko se-bulb ye-bulb. Wafunda ezininzi izityalo ze-alpine.
U-Albert Einstein - u-Einstein wayengumfundi waseFransi owaziwa yi-physics, owaziwayo ngokuphuhlisa i-General Theory of Relativity. U-Einstein wathabatha umvuzo weNobel kwi-Physics ka-1921 "ngenxa yeenkonzo ze-physics". Wakhela umgaqo we-photoelectric Impact kwaye udume ngokulingana kwamandla e-equation E = mc 2 .
UWillem Einthoven - I-Einthoven wayengumzimba we-physologist waseDutch kunye ne-botanist. Uphumelele u-1924 iNobel Prize kwiMedeni ngenxa yokuveliswa kwakhe kwe-electrocardiogram esebenzayo yokuqala (ECG okanye EKG).
Fausto d'Elhuyar - Fausto noJuan Jose d'Elhuyar babeyi-disco-covers of element tungsten. UFausto wayengumakhemikhali waseSpeyin oye wahlela iSikolo seMigodi eMexico City, eMexico. Indawo yakhe yobungcali yindlela yeemigodi yanamhlanje.
UJuan Jose d'Elhuyar - U-disco-Cover of tungsten, uJuan Jose d'Elhuyar wayengumdumi waseSpain nomgudu wamakhemikhali.
U-Emil Erlenmeyer - uRichard August Carl Emil Erlenmeyer wayengumakhemikhali waseJamani, mhlawumbi owaziwa kakhulu ngebhokisi le-Erlenmeyer elicwangcisiweyo. Ugxininiso lwe-Erlenmeyer yi-chemistry. Wakhela umyalelo we-Erlenmeyer, othi utshwala apho i-hydroxyl idibanisa ngqo kwi-carbon-bond bond-be-ketones okanye i-aldehydes.
I-Erlenmeyer iphinda iphakamise i-formula ye naphthalene.
Imfazwe Yehlabathi II: Ukuxhatshazwa
Indlela iF1 yeeMidlalo zoRhwebo ezihamba ngayo kwiHlabathi